दिनमा एक चम्चा मह खानुस्, पाइन्छ नसोचेको फाइदा
महका फ्याट, कोलेस्ट्रोल र सोडियम हुनाले यसले रोगप्रतिरोधात्मक क्षमता बलियो बनाउँछ ।
यसमा एन्टीसेप्टिक, एन्टीबायोटिक, भिटामिन बी१ र बी६ भरपूर मात्रा हुन्छ । स्वास्थ्य र सुन्दरता दुवैका लागि लाभदायक हुन्छ ।
जाडोमा हुने ससाना समस्याबाट यसले बचाउँछ ।
महमा भएको ग्लुकोजलाई शरीरले तत्कालै सोस्छ जसले गर्दा शरीरमा ऊर्जा कायम रहन्छ । अनि व्यायामअघि दुई चम्चा मह खाँदा थकान अनुभव हुँदैन । चिया वा कफी पिउँदा पनि चिनीको साटो मह खाने गर्नुस् ।
दिनको दुई चम्चा मह खाँदा खोकी लाग्दैन । यसमा एन्टीमाइक्रोबियल गुण भएकाले गर्दा संक्रमण उत्पन्न गर्ने ब्याक्टेरियालाई सिध्याउँछ ।
महले रगतमा पोलिफोनिक एन्टीअक्सिडेन्टको स्तर बढाउँछ जसले गर्दा तपाईं मुटुरोगबाट बच्न सक्नुहुन्छ ।
महबाट सेरोटोनिन रसायन निस्कने भएकाले मूड राम्रो रहन्छ । शरीरले यो सेरोटोनिन रसायनलाई मेलाटानिन रसायनमा परिवर्तन गर्छ । अनिद्राको समस्या छ भने राति सुत्नुअघि एक गिलास तातो दूधमा मह मिसाएर खानुभयो भने राम्रो निद्रा लाग्छ ।
बिहान खाली पेट मनतातो पानीमा मह र कागतीको रस मिसाएरु पिउँदा स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्छ ।
दिनदिनै एक चम्चा मह तातोपानीमा हालेर पिउँदा रक्तचाप नियन्त्रणमा रहन्छ ।
महले भोकलाई नियन्त्रणमा राख्ने भएकाले तौल घटाउन सहायता गर्छ । राति सुत्नुअघि मह सेवन गर्दा बढी क्यालोरी डढ्छ ।
जाडोमा महले अनुहारमा ३० मिनेटसम्म मसाज गर्नुहोस् । त्यसपछि मनतातो पानीले अनुहार सफा गर्नुस् । महले छालाका लागि प्राकृतिक मोइस्चराइजरको काम गर्छ । यसले छालामा आद्र्रता कायम राख्छ र डण्डीफोर, दाग र
छाला सुक्खा हुने समस्या हटाउँछ ।
फेवा किनारमा 'चचहुई'
बैशाख २५, २०७९
देशभरिका मुटु तथा फोक्सो रोग विशेषज्ञको एकदिने राष्ट्रिय सम्मेलन यहाँ सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्रिय मुटु तथा फोक्सो रोग समाजको आयोजनामा सम्पन्न सो सम्मेलनमा देशभरका १६८ विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सहभागिता...
भरतपुर अस्पतालको ओपिडी टिकट ७ बजेबाट
भरतपुर अस्पतालले सातामा पाँच दिन बिहान ७ बजेबाट नै ओपिडी टिकट खुला गरेको छ । अस्पतालले सातामा दुई दिन बिदा हुँदा बिरामीको चाप बढेकाले बिहान ७ बजेबाट नै पहिलो पटक टिकट खुला गरेको हो । अस्पतालका म...
वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. अभय यादवले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पतालमा आफ्नो विशेषज्ञ सेवा सुरु गरेका छन् । उनी यसअघि लामो समयदेखि कार्यरत बयोधा अस्पताल छाडेर नर्भिक अस्पतालमा सेवा सुरु गरेका हुन् । ...
झण्डै साढे १२ हजारको मतान्तरसहित भरतपुरमा रेनु दाहाल विजयी
रुपन्देहीको कोटहीमाईमा लोसपा विजयी
काठमाडौं महानगरपालिका अपडेटः १ लाख ४५ हजार मतगणना सकियो, कसको कति मत ?
मतगणना निर्देशिका संशोधनको काठमाडौंका उपमेयरका उम्मेदवार श्रेष्ठको आग्रह